Kutumira Mota Kubva kuUSA kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kutumira Mota Kubva kuUSA kuenda kuUK
Isu tiri nyanzvi dzeindasitiri patinounza mota kuUK, saka pane kuyedza nzira iyi tega, tinokurudzira zvikuru kushandisa masevhisi edu kuita kuti hupenyu huve nyore kwazvo kwauri. Kana iwe uri kutumira mota kubva kuUSA kuenda kuUK, yakatsanangurwa pazasi ndiyo nzira yatinoteedzera kuti tikuise iwe munzira munzira ipfupi inogoneka yenguva.
Inland USA Kutakura kweMotokari
Vamiririri vedu vekuUS, naivo vatakagadzira mubatanidzwa wemakore gumi, vacharonga kuunganidzwa kwemotokari yako kubva kukero yako kana kero yemunhu wawakatenga kubva mukati memazuva mashoma ekubhuka.
Isu tinopa akavharirwa kana akavhurika ekufambisa masevhisi kuzadzisa zvese zvinodiwa uye mabhajeti. Tichazoita kuti mota iendeswe kuchiteshi chiri padhuze kungave Oakland, Houston, Savannah kana New York.
Kutakura Mota & Kutakura
Mushure mekunge mota yako yasvika kudepoti yedu, isu tinozozoisa mumudziyo wayo wekutakura nehanya zvakanyanya uye nekutarisisa. Vamiririri vedu vari pasi muUSA vakasarudzwa nekuda kweruzivo rwavo uye kutarisisa kune zvakadzama, saka zvicharamba zvichisunga mota yako kuti ive panzvimbo yerwendo rwayo.
Kana iwe ukashuvira kuenderera mberi nekuvimbiswa, isu tinopa sarudzo yekusarudzika einishuwarenzi iyo inovhara mota yako kusvika pakuzara kwayo kukosha kwayo.
Paunenge uchipinza mota kubva kuAmerica kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose-usabhadhara mutero kana uchigona kunge uine mota kwemwedzi mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemaviri.
Kana izvi zvikasashanda zvino mota dzakavakwa muEU dzinoiswa pasi pe £ 50 basa uye 20% VAT, zvichibva pamari yawakabhadhara mota, neavo vakavakwa kunze kweEU vachiuya ne10% basa uye 20% VAT.
Mota zhinji dzinopfuura makore makumi matatu ekuberekwa dzinozokodzera 30% kupinza VAT uye hapana basa kana ichitumirwa kunze, zvichipa vasina kunge vakachinjwa zvakanyanya kubva mukushandisa kwavo kwekutanga uye havana kuitirwa mutyairi wezuva nezuva.
Kuedza & Kugadziriswa
Paunosvika kuUK, mota yako ichave inoenderana nemiedzo yakati wandei uye kugadzirisa kuti ive nechokwadi chekuti inosvika kuUK highway zviyero.
Kugadziriswa kunonyanya kusanganisira kugadziridzwa kumagetsi emasaini pamotokari. US inogadzirwa mota dzinowanzo kuve nezviratidzo zvakasiyana zvemavara, izvo zvinowanzobatanidzwa mumabhureki emagetsi mabhureki. Ivo zvakare vane akasiyana mavara akasarudzika uye kazhinji havana maside zviratidzo kana mwenje yemhute.
Isu tinoshandura mota yako kuUK zviyero tichishandisa yazvino LED mwenje tekinoroji, zvichitibvumidza isu kupedzisa shanduko dzese nediki diki aesthetic kukanganisa.
Mota dzinounzwa kubva kuUSA dziri pasi pemakore gumi dzichazoda kuongororwa yeIVA iyo DVLA isati yabvumidza kunyoreswa. Sezvo iri yega kambani muUK ine nzira yakavandudzwa yeIVA yekuyedza nzira yemotokari dzevatakurwi, iyo inogamuchirwa neDVSA, iyo nguva yainotora kupedzisa chiitiko ichi chekutenga inokurumidza zvikuru sezvo mota yako isingatombofaniri kusiya saiti yedu uye isu haisi pasi pehurumende nguva yekumirira.
Chiyedzo cheIVA hachidiwe pamotokari dzinopfuura makore gumi, zvisinei, chinofanirwa kupasa MOT saka chinofanirwa kunge chakakodzera mumigwagwa maererano nemarambi emasaini, kupfeka matai, kumisa uye mabhureki, ayo isu tichaongorora, kuti akwane kuendeswa mumigwagwa yeUK.
Sezvo isu takabudirira kukumbira vatengi vedu kuti vakwanise kuwana yedu pachedu Yangu Mota Yekutumira yakazvipira DVLA Akaunti Manager, pakupasa chirevo chekuyedza kunyoreswa kunogona kubvumidzwa nekukurumidza kupfuura dzimwe nzira.
Kutumira mota kubva kuUSA kuenda kuUK hakugone kuve nyore paunosarudza Yangu Mota Kunze, saka tifonere nhasi pa + 44 (0) 1332 81 0442 kuti tione kuti tingakubatsira sei.